I-FAQ yabasakazi bewebhu yeFlmmania
Ingabe kufanele ngisuse izingubo zami?
Cha, insizakalo yethu yokuxoxa ngevidiyo yenzelwe izithameli ezi-12+. Hlangana nababukeli bakho bese ubanikeza umbukiso ngaphandle kokuzenzisa okungenangqondo. Ukuze uthandwe ku-Roulette yengxoxo yeFlirtymania futhi wenze imali eningi uxoxe nje nababukeli bakho futhi ungashiyi isikhathi eside.
Ingabe kukhona imithetho noma imikhawulo emifudlaneni?
Ababukeli bethu bakhetha ukusakaza okubukeka kahle ngokukhanyisa okuhle. Ababukeli be-Flirtymania.live bangaba neminyaka engu-12 ubudala, ngakho-ke sicela ugcine izingubo zakho ngenkathi ikhamera.
Imifula ye-Erotic ayavunyelwe emakamelo okuxoxa omphakathi. Ukusakaza kwakho kungasuswa esigabeni somuntu omdala noma kuvinjelwe.
Ubulili ngekhamera, izenzo zobulili ezingaziphathi kahle (i-BDSM enzima, i-zoophilia, i-pedophilia), ukuzibulala nokusebenzisa i-propaganda yokusebenzisa izidakamizwa akunqatshelwe. Ukuphulwa kwale mithetho kubangela ukuvimba ngokushesha ngokuphatha.
Xhumana nokusekela kwe-Flirtymania
Zama okuthile okusha, bonisa amakhono akho futhi, okubaluleke kakhulu, xoxa nababukeli bakho. Ungakwazi futhi ukwengeza incazelo ekusakazweni kwakho bese umeme abantu kubakaki wengxoxo yomphakathi. Yonke imifudlana ethandwayo ishiwo ngaphezulu ngokuzenzakalelayo futhi idonse ababukeli abaningi.
Sabalalisa isixhumanisi ekusakazeni kwakho ngezokuxhumana, amawebhusayithi, amaforamu ukuze uthole okuningi.
Ngiyakwazi ukuvimbela abantu ezweni elithile ukuthi bangaboni ukusakaza kwami?